May 22, 2019 Xafiiska Puntland 5
Ciidamo katirsan Dowladda Somalia gaar ahaan qayb kamid ah Ciidankii dhowaan lagu soo tababarey Dalka dibadiisa ayaa caawa tijaabo dholatus ah kawada hawada sare ee Magaalada muqdisho. Ciidamadaan oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga ukaca ayaa dul
May 22, 2019 Xafiiska Puntland 14
Magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag waxaa caawa buux dhaafiyay ciidamo katirsan Puntland iyo maleeshiyaad taabasan Jabhadda Dulmidiid ee uu hogaamiyo jeneraalka gadooday ee Coll.Caare. Ciidamada kusugan Dhahar oo kuhubaysan hub culus ayaa diyaar u ah
DEG DEG+DAAWO: Xiisada Kenya & Somalia,Go’aanka DF iyo Fadeexadda Ilhan Cumar
May 21, 2019 muqdisho 2
Dowladda Kenya ayaa qorsheeneysa inay xirto toban ka mid ah xawaaldaha Soomaalida ee dalkaas ka howl-gala, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Caasimada Online. Qaar badan oo ka mid ah xawaaladaha ayaa maanta
May 21, 2019 Xafiiska Puntland 3
Inkastoo wararka ay heleyso Marqaannews ay sheegayaan in xaaladda guud ee gobolka Sanaag caawa ay tahay mid Dagan hadana waxaa isa soo taraya wararka kusaabsan khasaaraha ka dhashay dagaalkii manta. Marqaannews ayaa loo xaqiijiyay inuu
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Puntland Cabdullaah Maxamed ayaa maanta booqasho Ku Tagay deegaanka Damalla-xagare oo dhaca Koonfurta Gobolka Sanaag. Wafdiga wasiirka ayaa soo dhaweeyn balaadhan kala kulmay shacabka deegaanka oo Puntland katirsan kahor inta aanay Somaliland
May 21, 2019 Xafiiska Puntland 6
Wararka inaga soo gaaraya gobolka Sanaag ayaa waxay sheevayaan in degmada Dhahar hadda la keenay mid ka mid ah dhaawacyadii ku soo dhaawacmay dagaalkii galabta ka dhacay Dabala-xagare . Waxaa sidoo kale la sugayaa dhaawacyo
May 21, 2019 Xafiiska Puntland 0
Askari ka tirsan ciidamada booliiska ayaa caawa lagu dilay isgoyska Xalwo Banaadir ee Magaaladda Bosaso. Askariga la dilay oo lagu magacaabo Sharma’arke Axmd Waabeeri, waxaa uu ka tirsanaa saldhig Mijir ee magaaladda. Rag hubaysan ayaa
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa Aqalka Martida maanta oo talaado ah ku qaabilay Safiirka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Caetano Madeira, iyo Taliyaha AMISOM Tigabu Yilma Wondimhunegn iyo Masuuliyiin kale. Madaxweynaha
May 21, 2019 Xafiiska Puntland 10
Wararkii ugu dambeeyay oo ay heleyso Marqaannews ayaa waxay sheegayaan in xaaladda gobolka Sanaag caawa ay tahay mid dagan inkasto xiisad colaadeed la dareemayo kadib dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Damalla-Xagarre ee koonfurta gobolka Sanaag.
May 21, 2019 Xafiiska Puntland 4
Xiisad dibulaamiyadeed ayaa ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Kenya, ayadoo labadan dal uu ka dhexeeyo muran dhanka badda ah, taas oo keentay in dacwaddoodu ay gaarto Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ah ee ICJ. Muranka dhanka badda
May 21, 2019 Xafiiska Puntland 12
Wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo udhaxeeya Ciidamo ka kala tirsan Maamullada Puntland iyo Somalilandm waxaana dagaalka uu ka dhacay deegaanka Damalla-Xagare oo dhaca koonfurta
Xildhibaanadda laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, Ilhaan Cumar, ayaa Aqalka Congress-ka geysay hindise sharciyeed difaacaya xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda. Waxay dooneysaa in arrimaha socdaalka laga hor istaago qof
Wax ka yar 24 saac kadib markii dowladda kiiniya ay u diiday Fiisaha dal ku galka wasiir iyo xildhibaano Soomaaliyeed, ayaa hadana Kiiniya waxay qaaday tallaabo kale oo ay ku ciqaabayso dadka iyo dowladda Soomaliyeed.
May 21, 2019 Osman 1
Dowladda Kenya ayaa sababeysay waxa sababay in wasiirro iyo Xildhibaanno ka tirsan Dowladda Soomaaliya loo diido in fiisaha Kenya loogu dhufto baasaboorradooda. Saraakiil ka tirsan Waaxda Socdaalka Garoonka Diyaaradaha ee JKIA ayaa waxaa ay sheegeen
Ciidamada Kenya oo isaga baxay fariisimo muhiim ah oo kulahaayeen magaalada Kismaayo.
May 21, 2019 Xafiiska Puntland 1
Wararka ka imaanaya Magaaladda Kismaayo ee caasimadda KMG ah ee Maamulka Jubba-land ayaa ku waramaya in ciidamadda Kenya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ay isaga baxeyn Garoonka iyo Jaamacadda Magaaladaas. Ciidamadda Kenya ayaa muddo